Kabtan Iniesta Oo Shaaciyay Goorta Uu Ku Dhawaaqi Doono Kooxda Uu Ku Biirayo Kadib Ka Tegista Barcelona %
Kabtan Iniesta Oo Shaaciyay Goorta Uu Ku Dhawaaqi Doono Kooxda Uu Ku Biirayo Kadib Ka Tegista Barcelona
Kabtanka kooxda kubada cagta Barcelona ee Andres Iniesta, kaasoo wareysi siiyay Idaacadaha Radio Marca iyo Spanish Radio ayaa wuxuu si faah-faahsan uga hadlay mustaqbalkiisa Barcelona kadib halka uu ku dambeyn doono.
Wiilkaan reer Spain ayaa wuxuu ugu horeyn uu xaqiijiyay inuu haysto labo dalab, kuwaasoo uga kala imaanaya Shiinaha iyo Japan, islamarkaana uu go’aanka ugu dambeeya ku dhawaaqi doono ka hor inta uusan bilaaban koobka aduunka.
Iniesta ayaa wuxuu kaloo ka hadlay hadii uu kooxda uu ku biirayo u eegayo dano dhaqaale, wuxuuna meesha ka saarin taasi, waayo ayuu leeyahay dhaqaalah waa waxa ugu muhiimsan ee uu qof walba ubaahan yahay.
Laakiin, wuxuu mar kale ayiday in uusan ku biiri doonin koox ka dhisan Qaarada Yurub, sababtuna ay tahay in uusan dooneyn inuu udheelo koox tartan wayn ama xitaa mid Maxali ah uga hor-imaaneyso Bluagrana.
“Marka aan ka tagayo halkaan, waxay ka dhigan tahay in aanan kooxda u caawin Karin boqolkiiba boqol,” ayuu hadalkiisa ku bilaabay.
“Sidaas darteeda waxaan qaadan doono go’aanka ugu wanaagsan, una ah nafsadeyda mid daacad u ah,” ayuu sii daba dhigay.
“Waan dareemayaa in dad badan aysan ku farax-saneen inaan ka tago kooxda, laakiin waxaan la qaatay sanadkaan xili ciyaareed qurux badan, maadaama aan koobab ku guuleysanay.
“Hadda, waxaan haystaa labo dalab oo kala ah; Shiinaha iyo Japan, midka saddexaad wuxuu noqonayaa inaan ahay faa’ido doon.
“Sidoo kale, waxaa jira dano dhaqaale, maxaa yeelay qof walba ayaa ubaahan dhaqaalaha, waana waxa ay nolasha ku tiirsan tahay.
“Waxaan rajeynayaa in go’aankeyga uu idin soo gaari doono isbuuca soo socda.
“Sidaas darteeda, waxaan diyaar u ahay inaan qaato go’aankeyga ugu dambeeya ka hor Koobka Aduunka, inta uusan bilaaban,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Cabraqiga wayn ee kooxda kubada cagta Barcelona iyo xulka Spain ee Andres Iniesta.
Ramos Oo Muxuu Ka Yiri Hadii Ay Markii 3aad Oo Xiriir Ay Ku Guuleysan Karaan Champions League?
Mesut Özil iyo Ilkay Gündogan oo ah labo cayaartoy ayaa lagu dhaliilay in ay madaxweynaha Turkiga…….